စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ - အလုပ်ရုံ, WordPress Theme Download For Free | WikiWon
စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ – အလုပ်ရုံ, စက်မှုလုပ်ငန်း, အခမဲ့များအတွက်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို WordPress Theme ဒေါင်းလုပ်
mujeer ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 20180မှတ်ချက်များ
&gt;&gt;အကွောငျး & plugin ကို
&gt;&gt;စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ – အလုပ်ရုံ, စက်မှုလုပ်ငန်း,.....&gt;&gt;
1 100% တာဝန်
4 WOOCOMMERCE READY က
5 Unlimited COLORS
6 တော်လှန်ရေး slider
8 WordPress Custom READY က
စက်မှုအပြည့်အဝတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာအားလုံးအဓိကလည်ပတ်မှုစနစ်များမှတဆင့်အမျိုးမျိုးသောကိရိယာများပေါ်တွင်ကောင်းသောကြည့်ရှုမည်. ငါတို့သည်တုန့်ပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့အချို့အပိုဆောင်း features တွေထည့်သွင်း.
ကျနော်တို့နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာကဆက်ပြောသည်, သငျသညျစာမျက်နှာအပြင်အဆင်များနှုန်းစာမျက်နှာကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်သည့်နှင့်အတူ. ဒါဟာသင့်ရဲ့ site ကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည့်အခါအပြည့်အဝလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြု.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်သွင်း၏အထူးသဖြင့်ဂုဏ်ယူ. စက်မှုဇုန်၌သင်တို့ကိုပယ်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကိုလျှောခြင်းနှင့် Widgets တွေနှင့်အတူအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့သရုပ်ပြဖို့အခြေခံအားဖြင့်တဦးတည်းကလစ်များမှာ, လိုအပ်သောအပိုမရှိတင်သွင်းမှု.
WOOCOMMERCE READY က
ကျနော်တို့ WordPress ကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးက e-Commerce ပလက်ဖောင်းပါဝင်သည်. ယခုတွင်သင်သည်ငြိမ်ဝပ်နှင့်သင်၏ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချစတင်နိုင်ပါသည်. ယခုစက်မှုနှင့်အတူအွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုရယူပါ!
ကြီးမားတဲ့အရောင် option ကို pallet နှင့်အတူ, ယခုသင်အပြည့်အဝအတိုင်းအတာရန်သင့်ဆောင်ပုဒ်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်. သင်လိုအပ်အစီအစဉ်နှင့်သင့် client ကိုဆန္ဒနှင့်သင်၏ဆောင်ပုဒ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့် Customize.
ကျနော်တို့ထည့်သွင်း #1 စျေးကွက်အပေါ် slider ကို. သငျသညျမထိုက်မတန်မြင်သည်အတိုင်းသင့်ရဲ့ slider ကိုလှုပ်ရှားပုံများနှင့်အမျှအများအပြားဆလိုက်သို့မဟုတ် slider ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ဆန္ဒရှိအစဉ်အဆက်အဘယ်မှာရှိသူတို့ကိုနေရာ.
ကျနော်တို့ကိုလည်းထည့်သွင်း # 1-စာမျက်နှာဆောက် Visual Composer, သင့်ရဲ့အလုပ်စေမည်ဖြစ်သော, နိုင်တဲ့ coding-အခမဲ့နှင့်တည်ဆောက်မယ့်လေပြေ.
WordPress Custom READY က
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏အဓိကရွေးချယ်စရာတွေနဲ့အဆင်ပြေမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သငျသညျအစား WordPress ကိုအကောက်ခွန်ကိုသုံးနိုင်သည်.
ကျနော်တို့ဘန်ဝစ်တိကျတဲ့ Stylesheets ဆက်ပြောသည်ပါပြီ, ကြောင်းလက်ဝဲဘာသာစကားများမှလက်ျာဘက်များအတွက်ထောက်ခံမှု add(Arabic အဘိဓါန်, ဟီဘရူး, စသည်တို့ကို)
အကွောငျး & plugin ကို	Industrial Factory industry theme, Industrial Factory industry WordPress Theme, Industrial Factory industry WordPress Theme free download, Industrial Factory industry WordPress Theme free download latest version	bookmark
ယခင်အပိုဒ် Ultimate Fishing Simulator Game for PC Latest Version Download
next ကိုပုဒ်မ3အန်းဒရွိုက်သည်အကောင်းဆုံး McDonalds App ကို (သငျသညျလွတ်သွားသောမဖြစ်သင့်)